समुद्रशास्त्रअनुसार हत्केलामा यस्ता चिह्न देखिन्छ ? धनी हुने लक्षण हो यो ! - Internet Khabar
समुद्रशास्त्रअनुसार हत्केलामा यस्ता चिह्न देखिन्छ ? धनी हुने लक्षण हो यो !
September 22, 2017 July 28, 2018 Internet Khabar
काठमाडौं । कर्मबाट भाग्य बदल्न सम्भव छ तर भाग्य बलियो छ भने कर्म गर्न दुईगुणा बढी उत्साह आउँछ।
लक्षणशास्त्र वा सामुद्रिक शास्त्रमा व्यक्तिका शारीरिक अंगहरूको बनावट र मुद्रा हेरेर शुभ वा अशुभ प्रभावको बारेमा चर्चा गरिएको छ । यहाँ हामी पुरुषहरूको त्यस्तो चिह्नका बारेमा कुरा गर्नेछौं जसको उपस्थितिले उनीहरूको जीवनमा सफलता तथा धन अवश्य छ भन्ने देखाउँछ।
कुनै व्यक्तिको हत्केलामा ध्वजाको चिह्न बनेमा ऊ जीवनमा अत्यन्तै धनी हुन्छ भनी बुझ्नुपर्छ । ऊ गरीब परिवारमै जन्मेको भएपनि आफ्नै बलबूतामा उसले विशेष लाभ प्राप्त गर्छ।
बूढी औंलामा जौको चिह्न
पुरुषको बूढी औंलामा जौको चिह्न अति भाग्यशाली मानिन्छ। यस्तो व्यक्ति आफ्नो प्रयासबाट अत्यन्तै धनी हुन्छ । यही चिह्न हत्केलाको बीच भागमा छ भने व्यक्तिलाई अत्यन्तै उच्च गुण भएको सन्तानप्राप्ति हुन्छ जसका कारण नै उसले धन र प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ।
हत्केलामा रेखाको गहिराइ
हत्केलामा हलुका रेखाहरू छन् भने रोगकारक र दुर्भाग्यशाली मानिन्छन् । ठीक विपरीत गुलाबी रंगको गहिरो रेखा हत्केलामा छ भने शुभ हुन्छ । यस्तो रेखा भएको अनि अर्को रेखाले नकाटेको छ भने व्यक्ति अत्यन्तै भाग्यमानी हुन्छ । उसलाई आफ्नो सबै काममा सफलता प्राप्त हुन्छ र जीवनमा धेरै उन्नति गर्छ ।
तपाईंका औंला लामा र सिधा छन् भने तपाईंसँग प्रशस्त धन हुनेछ । कुनै व्यक्तिले अञ्जुलि बनाउँदा बीचमा सानो प्वाल देखियो भने उसले सधैं आर्थिक समस्या भोगिरहन्छ । तर यसरी अञ्जुलि बनाउँदा खाली ठाउँ देखिएन भने व्यक्तिले अवश्य धन जुटाउँछ र सम्पन्नता प्राप्त गर्छ । यस्तो व्यक्ति सफल व्यापारी हुन्छ ।
हत्केलामा चक्र, तरवार, विष्णु चिह्न, तोमर, त्रिशूल र धनुषमध्ये एक चिह्न भएमा उक्त व्यक्ति उच्च सरकारी कर्मचारी हुन्छ । उसको जीवनमा धन वैभव र सम्पत्तिको कमी रहँदैन । यस्ता व्यक्ति पराक्रमी हुन्छन् र समाजसेवा पनि गर्छन् । मन्दिर र त्रिकोण चिह्न भएका मानिस आध्यात्मिक हुन्छन् र उनीहरूलाई समाजमा उच्च सम्मान प्राप्त हुन्छ । उनीहरूको परिवार पनि सम्पन्न हुन्छन् ।
September 22, 2017 July 28, 2018
कुन राशिका व्यक्तिले लुकाउँछन् आफ्नो कस्तो स्वभाव ?
August 25, 2017 July 28, 2018
कुन महिनामा के खान हुदैन, जानिराखौँ
November 6, 2017 July 28, 2018
October 8, 2017 July 28, 2018
‘बर्थ डेट’बाट यसरी थाहा पाउन सकिन्छ आफ्नो स्वास्थ्य र स्वभाव
November 11, 2017 July 28, 2018